Konquest: yakapusa vhidhiyo mutambo wekukunda magaraxi | Linux Vakapindwa muropa
Hazvisi zvese zviri kushanda uye kushanda pamberi pechidzitiro. Dzimwe nguva zvakakoshawo kutora nguva yekuzorora uye kuzorora nekutamba mimwe mitambo yakapusa. Mimwe mitambo yakaita Kmine kana Mines, Solitaire, Tetris, Konquest, nezvimwewo, zvinogona kunakidza kutamba nekukurumidza munguva idzodzo dzakafa, nekuti mutambo wemimwe mitambo yemavhidhiyo yakaoma inoda nguva yakawanda.
Konquest ishanduro yeGNU-Lactic Konquest, mutambo uri nyore kwazvo wekuteedzera kukunda mamwe mapuraneti mugirazi kutumira spacehips zvinehunyanzvi. Chinangwa ndechekuvaka yako wega ststarar empire uye uve akanakisa evatambi.
Konquest ndeyake mukuru KDE software repertoire, saka ichagobatana zvisina musono nenzvimbo yedesktop iyi. Nekudaro, inogona kuiswa kune chero imwe distro ine akasiyana desktop desktop. Uye ndezvekuti, sekudzokorora kwandakaita kakawanda, kuti mutambo wevhidhiyo unoenderana neGNOME kana raibhurari dze KDE hazvireve kuti haugone kuiswa mune dzimwe nharaunda. Kana kutsamira kwemaraibhurari kuchigona kugutsikana, ichakwanisa kumhanya zvakajairika.
Kana iwe usati uchiziva uyu mutambo wevhidhiyo kana iyo imwe Konquest yakavakirwa, iwe unofanirwa kuziva kuti iwo mutambo we shanduko-based zano. Iyo yakatanga kugadzirwa naRuss Steffen, ikozvino sechikamu cheKDE sezvandataura.
Chinangwa ndechekukunda iyo renyeredzi nekutumira kurwisa kumapuraneti evavengi. Inogona kutambwa ichipesana neAI uye zvakare inotsigira iyo chaiyo nzira yekutamba yeiyo zvekare, sezvo iri munhu kurwisa munhu pane imwechete PC.
Kutamba, pachiratidziro unenge uine zvese zvaunoda nenzira yakapusa uye yakajeka, uye iyo kwazvakarerekera mapuraneti pamepu. Aya mapuraneti asina kwaakarerekera mapuraneti asina muridzi, uye panogona kunge paine pakati pe1 kusvika 35. Pamusoro pezvo, mepu icharatidza kuti vatambi vanogoverwa sei, ndiani anozopinda mukuita kana mukana wavo wasvika.
Vatambi vachave ne yekutanga nyika iyo yavanowana nayo zvikepe kana kurwisa. Izvo zvakakosha kuti uwane yakanaka ngarava yezvikepe, sezvo iwo akawandisa huwandu huripo, yakawedzera mikana yekukunda imwe nyika. Kurwiswa kunoitwa nekusarudza huwandu hwengarava, yepakutanga nyika panosara zvikepe uye nyika yekuenda kwavanorwisa. Kana iwe ukabudirira, iwe uchakunda akadaro nyika uye ngarava ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Konquest: yakapusa vhidhiyo mutambo wekukunda magaraxies